စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Air ကိုစင်းလုံးငှားဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေဗာဂျီးနီးယားလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ဦးသည်ဖြည်းဖြည်းအနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့်သင်၏ destination သို့သငျသညျရနိုင်. ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးချဖို့သင်သည်ဆိုင်းငံ့အစည်းအဝေးများအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြုသို့မဟုတ်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်ဆောင်ကြဉ်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေခေါ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်သင့်ချိန်းဖို့လမ်းအပေါ်တစ်ဦးအဖွဲ့သည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းရှိနိုင်ပါသည်, Norfolk, Chesapeake, Richmond, Newport သတင်းများ, Hampton, ပို့စ်မောက်, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီး Suffolk ဗာဂျီးနီးယားလေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 866-777-6236 အချည်းနှီးသောခြေထောက်ယင်ကောင်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်.
ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ VA သို့ငှားမည့်အသေးစားပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်အသုံးပြုခြင်းသင်လေထဲတွင်လုံခြုံစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် privacy ကိုဆိုလိုနိုင်ပါတယ်. ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူပျံသန်းသည့်အခါလျှို့ဝှက် setting ကိုအတွက် client များအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုထမ်းတွေနဲ့ Staffed မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်. သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသောယုံကြည်မှုရှိနိုင်ပါသည်. တစ်ခုတိုးချဲ့ခရီးစဉ်တလမ်းတည်းဖြင့်ပျံသန်းနိုင်စွမ်းတဲ့အပေါင်းဖြစ်ပါတယ်. အများစုမှာပုဂ္ဂလိကလေကြောင်း Chartered ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်အခြေစိုက်စခန်းမှပြန်လာခရီးစဉ်များအတွက်ဗလာခြေထောက်စာအုပ်ဆိုင်.
ငါ့ကိုအနီးနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်သဘောတူညီမှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေဗာဂျီးနီးယားလေယာဉ်မှူးပြန်လာပျံသန်းမှုအိမ်ပြန်ဘို့ပေးဆပ်ရန်အဘို့ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤသည်ကိုလည်းလူနက်ရှိုင်းလျှော့စျေးမှာပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားခံစားရန်အဘို့အခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေး. privacy ကိုပြဿနာမဖြစ်လိုလျှင်သင်သည်တလမ်းတည်းဖြင့်စာအုပ်ကနေပြန်လာအိမ်ကလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းစာရင်းထဲမှာပေါ်တွင်သင်၏အမည်နှင့်ဦးတည်ရာကိုထည့်ထားနိုင်ပါတယ်. ဒါကပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားတွေနဲ့ပျံသန်းဆိုလိုခြင်းနှင့်နေဆဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိသောအခြားအခရီးသွားများအတွက်နှင့်အတူစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းနှုန်းထားခံစားနိုငျ.
ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားပျံ၏ဇိမ်ခံခြေထောက်အခန်းစာရေးဆိုလိုတယ်, အဆင်ပြေထိုင်ခုံများနှင့်များသောအားဖြင့်တစ်ဦးဆိုဖာဘား. စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများဤသူသည်သင်တို့ထိုက်တဲ့ဇိမ်ခံဖြစ်ပါသည်ပိုပြီးထိုင်ခုံလျော့နည်းအခန်းထဲမှာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသောအခါအချိန်မှာတော့. ဤအအပေးအယူ၏အားသာချက်ကိုယူပြီး၏စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုစည်းမျဉ်းထဲမှာမဆိုစစ်ဆေးမှုများလျှင်သင်တိုတောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များကိုခံစားအနည်းငယ်သာနိုင်ပါတယ်ဆိုလို.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ဗလာခြေထောက်ပြန်လာလေယာဉ်ဈေးလျှော့၏အားသာချက်ကိုယူပြီးဥာဏ်ကောင်းသောလုပ်နှစ်ခုလုံးကို. အစည်းအဝေးဖို့လမ်းအပေါ်တစ်ဦးကလျှို့ဝှက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း setting ကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အရေးတကြီးနေတဲ့အချိန်အတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Air ကိုစင်းလုံးငှားဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေဗာဂျီးနီးယားလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပျံသန်းဖို့ပြီးပြည့်စုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပျော်မွေ့ဖို့ဗလာခြေထောက်ပျံသန်းမှုအသုံးချဖို့.
လေကြောင်းအတွက်ဂျက်လေယာဉ်ပျံလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေဆိပ်များစာရင်း ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ, VA သို့ ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Gloucester, Wight ၏ကျွန်း, ဂျိမ်းစီးတီး, Mathews, Surry, နှင့်နယူးယောက်မြို့ကောင်တီ http://www.airnav.com/airport/42va/
ဗာဂျီးနီးယားကမ်းခြေ, Norfolk, Chesapeake, ပို့စ်မောက်, ဝိန်း Fort မွန်ရိုး, Hampton, Suffolk, Newport သတင်းများ, ကယ်ဆယ်, Carrollton, Moyock, Poquoson, Yorktown, Knotts ကျွန်း, ဘက်ထရီပန်းခြံ, ကိပ်တောင်း, တောင်ပိုင်း Mills က, Smithfield, Seaford, Currituck, မေပယ်, Wight ၏ကျွန်း, ကိပ်ချားလ်စ်, လက်ပါးစေ, Shawboro, ဝိန်း Fort Eustis, ဝင်ဆာ, Cheriton, လှေ, Corolla သည်, ပင်လယ်မြင်ကွင်း, Townsend, Coinjock, Corapeake, ကန်ဒန်း, Achilles, Gloucester ပွိုင့်, Severn, Maryus, ကမာ, နယူးပွိုင့်, Hayes, Susan, သာမန်, အဖြူနားမှာ, Bena အဘိဓါန်, Wicomico, Sunbury, ဆိပ်ကမ်း Haywood, Eastville, အဲလစ်ဇဘက်စီးတီး, Zuni အဘိဓါန်, Surry, Aydlett, Carrsville, Foster, Onemo, Bohannon, Elberon, Belvidere, Digg, Ivor, Marionville, Hobbsville, Williamsburg, ဘီလ်ဂိတ်, ပေါ့ပလာပင်ဌာနခွဲ, Cardinal, Mathews, Machipongo, ရှိလောမြို့၌, Ware လည်ပင်း, Roduco, လ, ဂျိမ်းစ်တောင်း, Schley, Zanoni, ငှက်သိုက်, Lightfoot, ယူဆပါတယ်, Gatesville, Hudgins, Gloucester, Franklin, မွောကျ, Nassawadox, Dendron, Bellamy, သေတ္တာကို, Hallieford, Gwynn, Franktown, Winfall, Wakefield, Grimstead, Wardtown, Jamesville, Willis ဆိပ်ခံဗောတံတား, Dutton သည်, Jarvisburg, သင့်ရဲ့, Tyner, Sedley, Cobbs Creek အဘိဓါန်, Durant လည်ပင်း, Hertford, Exmor, Deltaville, Hartfield, Hardyville, Harrellsville, Courtland, Powell ပွိုင့်, ဝုဒ်လက်ဝါးကပ်တိုင်လမ်းများ, Belle Haven, Claremont, နွေဦး Grove, နှိုးဆျော, နော်ဝေ, Winton, အဖြစ်, Cofield, Waverly, Toano, Quinby, ခ, Davis ကဆိပ်ခံဗောတံတား, Harbinger, Newsoms, ပွိုင့်ဆိပ်ကမ်း, Topping, Kitty Hawk ရဟတ်ယာဉ်, ပန်းချီဆရာ, Shacklefords, ကျိုင်းကောင်ဟေးလ်, Craddockville, Pungoteague, White ကကျောက်စာ, Saluda, Hacksneck, Barhamsville, Edenton, Keller, Colerain, Lanexa, Wachapreague, Irvington, Harborton, Capron, Ahoskie, Murfreesboro, Melfa, Weems, Powellsville, Boykins, Ruthville, Urbanna, Locustville, Severn, Mattaponi, Sussex, ချားလ်စ်စီးတီး, မာရျနတျတောင်ကုန်းကိုသတ်, အနောက် Point သို့, Mollusk, ရွှင်လန်းသောပွိုင့်, ယေးလ်, Kilmarnock, Pendleton, Disputanta, ရွှင်လန်းသောဟေးလ်, Onley, Onancock, Providence Forge ရဲ့, Mascot, ဘုရားကျောင်းကြည့်ရန်, Branchville, Lancaster, Drewryville, Tasley, Milwaukee, Potecasi, ရေကြည့်ရန်, Accomac, ကိုလံဘီယာ, Conway, ရွှင်ပျသော, Little က Plymouth, Wicomico ဘုရားကျောင်း, Aulander, Margarettsville, Woodland, Greenbush, ဂျမေကာ, Manteo, မင်းသားဂျော့ခ်ျ, Roper, Carson, Creswell, Nags ဌာနမှူး, Tangier, နယူး Kent, Hopewell, Stony Creek အဘိဓါန်, Reedville, Parksley, Nuttsville, Morattico, Laneview, Burgess, ဝင်ဆာ, ဝိန်း Fort Lee က, ရှငျဘုရငျတို့သဘုရင်မကြီးတရားရုံး, Quinton, ပီတာစဘတ်, Jarratt, Nelsonia, ကျိုးနွံမြို့, Stevensville, ရှငျဘုရငျဝီလျံ, Heathsville, Ophelia, ငွေရတတ်သောသူရင်ပြင်မှာ, မန်းဆိပ်ကမ်း, Kelford, Wanchese, Bloxom, Edwardsville, Center ကလက်ဝါးကပ်တိုင်, Chester, ထက်သော, Roxobel, ကမ်းရိုးတန်း, ကိုလိုနီခေတ်ဟိုက်, Farnham, Plymouth, Mears, Mappsville, Walkerton, ရွာ, Lewiston Woodville, Hallwood, သဲကျောက်, သာယာသောဟေးလ်, Bruington, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, ကျောက်များ, Assawoman, Dunnsville, စက်ဇ, သပိတ်ပင်ခန်းမ, Jenkins တံတား, Temperanceville, Sanford, Richmond, အတ္တလန္တိတ်, အဘိဓါန် Highland Springs, Withams, Mechanicsville, Tillery, ပျောက်ဆုံး, Wallops ကျွန်း, Hamilton က, စိန့် Stephens ဘုရားကျောင်း, Tappahannock, Jamesville, စကော့တလန်လည်ပင်း, Aylett, Williamston, Studley, Richmon တက္ကသိုလ်, Chincoteague ကျွန်း, သပိတ်ပင်စီးတီး, Everett, Hassell, Hobgood, Hanover, Newtown, Glen Allen က, အရှိန်, Robersonville, Parmele, Ashland, ဗေသလမြို့, Tarboro, conetoe, Doswell